Email Akwụkwọ Akụkọ Monetization: Abụọ Nhọrọ Nhọrọ maka ndị na-ede blọgụ na Micro Publishers
Mmetụta abụghịzi naanị ngalaba nke nnukwu ndị nkwusa. A na-emegharị eyeballs na dollar ahịa ka ọ bụrụ ndị agha nke obere, ndị nkwusa niche; bụrụ ndị na-elekọta ọdịnaya, ndị na-ede blọgụ, vloggers, ma ọ bụ pọdkastị.
N’iburu onu ahia ndi a n’uche, ndi oru nta-akuko a na-acho uzo ha ga-esi wee chee echiche rite uru na ndi na ege ha nti, na mgbali ha.
Uru na Akwụkwọ Akụkọ Email
Tinyere ndi ozo na usoro ego ha na-eji ugbu a, dika ihe ngosi mgbasa ozi nke ebe nrụọrụ weebụ na nkwado nke ndi mmadu, ndi oru nkwusa nke oge a nwere otutu uzo di nma ichota akwukwo ozi email ha.
Monetization nke akụ nke email nke ndị nkwusa abụghị ihe ọhụrụ ma ruo n'oge na-adịbeghị anya enwere nnukwu mgbochi, dị ka nha ndepụta kacha nta, nke na-ewepu obere ndị nkwusa na nsonye.
dị ka a zuru ezu ozi email gị n'ụlọnga na agụụ maka ibipụta akwụkwọ, anyị ejirila ọtụtụ ụzọ iji nyere ndị na-ede blọgụ aka ka ha bulite ego email ha - na-enweghị ire ozugbo ma ọ bụ mụbaa ọrụ ha. Lee abụọ n'ime ndị ọkacha mmasị anyị:
Mgbasa ozi na Email Akwụkwọ Akụkọ
Anyị ahụla na mgbasa ozi ngosi, nke etinyere na ma ọ bụ gburugburu ozi ịntanetị, bụ onye na-eme ihe siri ike metụtara ọnụahịa; maka ndị mgbasa ozi na ndị mbipụta.
Martech Zone were otu n'ime netwọọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ukwuu, Dị ndụ, iji monetize akwukwo ozi ya.
Akwụkwọ Akụkọ Hacker, nke bipụtara Kale Davis, pịa LaunchBit iji gbanye otu mgbasa ozi na akwụkwọ ozi ọ bụla. Kale na-eji MailChimp dị ka onye na-eweta ọrụ email ya nke ejikọtara na LaunchBit; na-eme ka nhọrọ ad dị mfe ma na-akpaghị aka ogwu.
N'aka nke ozo, Dan Lewis na Ugbu a Amaara M egosiputa otutu mgbasa ozi na akwukwo ozi ya. Dan eji Dị ndụ yana LaunchBit. Ha abụọ jikọtara ọnụ na onye na-eweta ọrụ email ya.
Ozi-e nkwado (aka Email List mgbazinye)
Oghere mgbazinye ndepụta email agbanweela n'afọ ndị na-adịbeghị anya, maka ka mma. Aghọtaghị m, m ka nwere ụlọ ọrụ ndepụta nke na-agbazite, ma ọ bụ na-ere, ndepụta aha email na-abaghị uru mana ọ bụkwa eziokwu na ezigbo ndenye aha email na-aga n'ihu na-abụ onye na-eme ike. N'agbanyeghị nke a, ọtụtụ obere ndị nkwusa ekweghị echetụ n'echiche mgbazinye ndepụta email dị ka atụmatụ itinye ego.
Ma eleghị anya, ọ bụ n'ihi na ndị nkwusa niche nwere njikọ chiri anya, nke onwe ha na ndị debanyere aha ha ma achọghị ka ha dị ka ndị na-erite uru. Ma eleghị anya, ọ bụ enweghị nghọta nke ihe ndepụta mgbazinye n'ezie gụnyere.
Ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ bụ nanị nkọcha nke aha ahụ na-agbanyụ ndị nkwusa ọhụrụ. Kama nke “mgbazinye email ndepụta” anyị na-akpọ ya mgbe niile dị ka Kwadoro Ozi ịntanetị ma ọ bụ Raara Onwe Emails nke, na-eche na onye mgbasa ozi na-enyekarị a na-agbakwunyere na ndị nkwusa email template, bụ ihe kwesịrị ekwesị.
Lee ozi email nke akwadoro DailyWorth; mbipụta nke na-enye ụmụ nwanyị ndụmọdụ bara uru banyere ego onwe onye kwa ụbọchị. N’ihe atụ a, onye mgbasa ozi bụ ShoeMint.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ sitere na Wilson Web, onye na-ebipụta Ahịa Web Taa akwukwo ozi nke mejuputara ecommerce, ahia email, na uzo ahia webusaiti. Onye mgbasa ozi ahụ bụ Lyris, onye na-eweta ọrụ email na-ere ahịa.
Na ahụmịhe m, ụlọ ọrụ nchịkọta aha email nke taa na-arụ ezigbo ọrụ nke ịhazi ndị mgbasa ozi na niche ndị na-ege ntị. Nkà na ụzụ na ahịa na-aga n'ihu nke ukwuu na-enye ndị mgbasa ozi, ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ndepụta ha, ka ịgbazite ndepụta, ngwa ngwa, ma nwalee arụmọrụ.
Gịnị Bụ Ọrụ Ndị Onye Nkwusa?
Netwọk ngosi email na ụlọ ọrụ mgbazinye ndepụta email na-eme ka iwepụta akwụkwọ akụkọ dị mfe maka ndị mbipụta. Site na olile anya na ire ahịa na ịkọ akụkọ na ịkwụ ụgwọ, ha na-eme ya niile.
Ọrụ ndị mbipụta akwụkwọ na-aga n'ihu na-ejedebe na ịhọrọ / ịnakwere mgbasa ozi mgbasa ozi / onyinye ma na-aga n'ihu itinye ndị debanyere aha ha.
Ego Ole Ka Ndị Nkwusa Atụrụ Ga-atụ Anya Ime?
Email Ngosipụta Mgbasa ozi esighi na -A na-azụta mgbasa ozi ngosi email na ntọala arụmọrụ, dị ka ụgwọ-kwa-pịa ma ọ bụ ụgwọ-kwa-echiche, ya mere nha ọtụtụ a na-ejikarị maka ịkọwapụta na ịgbakọ ego bụ irè na-eri-kwa-puku ma ọ bụ eCPM. eCPM na-agbakọ site na ịkekọrịta ego zuru ezu site na ọnụọgụ nke mmetụta dị ọtụtụ puku. Mgbe a jụrụ ya gbasara nkezi eCPMs, Elizabeth Yin, Co-guzobere na LaunchBit, na-ekwu "na e nwere bụ ihe dị nnọọ iche, site na di na nwunye dollar ruo ihe fọrọ nke nta $ 100 eCPM (na-emepe)." Ọ gara n'ihu na-ekwu na “akwụkwọ akụkọ kachasị mma dịka Onye na-eme obi ụtọ, ndị na-ere ahịa nke aka ha, na-akpata eCPM $ 275 dabere na usoro mgbasa ozi. ”
Ozi ịntanetị raara onwe ya nye -A na-azụta ozi ịntanetị raara onwe ya nye na a ọnụahịa-kwa-puku ndabere, ma ọ bụ CPM, nke pụtara na ndị mbipụta na-anata ego dị larịị maka puku puku ozi ịntanetị ezigara, gbakwunyere ụgwọ maka ebumnuche ọ bụla onye mgbasa ozi chọrọ. Ejikọtaghị ịkwụ ụgwọ na arụmọrụ, agbanyeghị ndepụta ndị ịrụ ọrụ na-adịghị mma ga-adaba ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ mgbazinye ndepụta ọ bụla bara uru nnu ha. Ozi ịntanetị ndị raara onwe ha nye na-nkezi $ 80- $ 250 CPM, dị ka Worldata si Ndepụta Ọnụ Ahịa, na ụfọdụ azụmahịa azụmahịa na azụmahịa nke mba ụwa depụtara ihe ruru $ 400 CPM. Dabere na ugbu a nọmba na ugwo maka raara onwe ya nye ma ọ bụ nkwado email ka ukwuu karịa email ngosi mgbasa ozi, ma na-eche echiche nkwusa ga-nhọrọ na otú ugboro ugboro ha na-eziga ndị a raara onwe ha nye ozi ịntanetị; ya mere enwere ohere pere mpe iji rite uru site na mgbazinye ndepụta email.
Ego kewara -Ma email ngosi mgbasa ozi email na ụlọ ọrụ mgbazinye email na-arụ ọrụ na arụmọrụ; nke pụtara na enweghị ego onye nkwusa, kama ha na-ekere òkè na ego ha nwetara site na onye mgbasa ozi. Ọmụmaatụ, na email mgbazinye mgbazinye, nkwusa ga-edebe 50% -80% nke ọ bụla ndepụta mgbazinye iji. Ego kewara maka mgbasa ozi ngosi email, agbanyeghị, ọ ga-esitụ ike ịkwatu.
Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị na-achọ nnukwu ego, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ maka ịnweta ya. You nwere ike ịrere ngwa ahịa email gị n'onwe gị, mana ahụmịhe egosila m na ị nwere ike ịnweta obere ego ka ị na-arụsi ọrụ ike maka ya. Karịsịa na email ndepụta mgbazinye n'ógbè.
Ka obere ndị na-ebipụta akwụkwọ na-ere ahịa nke ọma, ọ ga-achọkwu ọdịnaya ha. Nke ahụ ga - eme ka ndepụta ndepụta, nke ha nwere ike itinye ego na n'ụzọ na - enweghị isi, n'agbanyeghị ma ha họrọ iji mgbasa ozi nkwado, ozi ịntanetị nkwado, ma ọ bụ usoro ọ bụla ọzọ.
M na-ekwu, ndị nkwusa na-arụsi ọrụ ike nwere ike ịka mma ịhapụ ụtụ ego na ndị ọkachamara ma nwalee usoro niile dabara adaba nke ndị na-ege ntị. Gịnị ka ị na-ekwu?
Tags: email Marketinglaunbitdị ndụnkwusa
Apr 18, 2012 na 7: 23 AM
Ana m emepe akwụkwọ akụkọ mbụ m na nke a bụ ozi mara mma m ga-eji. Daalụ.